crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> February | 2018 | HimiloNetwork
Abdulqawi Ahmed Yusuf – Somali guuleystay!
Zakariya February 19, 2018	Leave a comment 799 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray soomaaliya, waxa ay xudduntiisu ku duugantahay Magaalada Eyl ee Gobolka Nugaal, sanadii 1948 ayuu ifka yimid, tacliintiisa ilaa heer jaamacadeed waa dalka hooyo oo waxa uu ka baxay jaamacadda umadda, inkastoo heerka labaad iyo kan saddexaadba uu ku qaatay dalalka banaanka. Waxa uu kamid ahaa tobbankii macallin ee ugu horreysay jaamacadda ...
Madax-aan-Muslim ahayn oo ku baaqaya in Ragu guursadaan Dumar badan.
Zakariya February 18, 2018	Leave a comment 396 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Saraakiil dowladeed oo aan Muslimiin ahayn oo katirsan xukuumadda maamul-goboleedka Imo ee Nigeria ayaa ugu yeeray laboodka dalkaas inay guursadaan laba iyo saddex dumar ah si ay u dhimaan dhillaysiga. “Idin kuma qasbayo, waase idin ku dhiirri-gelinayaa inaa guursataan laba iyo ka badan oo dumar ah si aad u yareysaan haweenka nin la’aanta ku jooga guryaha,” Oghechi Ololo ...
Zakariya February 15, 2018	Leave a comment 407 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Shiinaha ayaa lagu soo warramayaa inay 60,000 oo militarigeeda kamid ah u qoondeysay inay ka qeyb noqdaan mashruuca dhir-beerista – dadaal lagu doonayo inay looga hortago wasaqeynta hawada – si kor loogu qaado baaxadda keymaheeda. Cutubyo kamid ah People’s Liberation Army, oo ay wehlinayaan xoogaga ciidamada booliska ayaa loo daabulay dhinaca waqooyiga ee dalka Shiinaha si ay u ...
Zakariya February 13, 2018	Leave a comment 262 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Garsoore Masiixiyad ah oo ku nool waqooyiga Lubnan ayaa saddex wiil Muslimiin ah amartay inay xifdiyaan Suurad kamid ah Qur’anka Kariimka ah kadib markii lagu soo eedeeyey inay aflagaado u geysteen Nabi Ciise hooyadiis Maryam. “Sharcigu waa iskuul ma ahan xabsi,” ayay tiri Joceline Matta. Matta ayaa fartay saddexda wiil inay soo aqristaan Suuradda al-Imraan ee kamid ah ...
Hooyo kaligeed ku guuleystay inay beerto in ka badan hal Milyan oo Geedo ah.
Zakariya February 12, 2018	Leave a comment 296 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Yi Jiefeng, oo ah haweeney Shanghai ku nool ayaa ku guuleystay beerista malaayiin geedo yaryar dhulka Mangolia 14-kii sano ee lasoo dhaafay. Yoolkeedu waa dib u dhireynta Saxaraha Alashan – iyada oo sidoo kale ilaalinaysa xusuusta wiilkeedii geeriyooday 18 sano kahor. Sannadkii 2000, wiilka kaliya ee Yi, oo lagu magacaabo ang Ruizhe, wuxuu ku dhintay shil gaari oo ...
Hindiya – Marka Ninku uusan helin Meherkii uu ku guursaday Xaaskiisa.
Zakariya February 12, 2018	Leave a comment 316 Views
New Delhi (Himilonetwork) – Seyga 28-jirta Rita Sarkar wuxuu joogto uga caban jireen sida qoyskeeda aysan ugu dhammeystirin meherkii uu ku aroosay, hayeeshe waligeed masuuraysan inay ka gaari karto heer uu kelyaheeda mid kamid ah – si xatooyo ah – kala bixi karo. Wayse qaldaneyd. Haweeneydan ayaa dhawaan sheegtay in muddo badan ay ahayd dhibane qoys oo seygeeda iyo ehelkiisaba ...
La kulan – Ninka Gurigiisa ku xanaaneeya Bisado gaaraya 300.
Zakariya February 12, 2018	Leave a comment 359 Views
New York (Himilonetwork) – Haddii aad mar soo agmarto guriga Chris Arsenault, oo aad aragto 300 bisado ku nool, waxaad runtii u qaadaneysaa in 58-jirkan uu yahay mid ku waalan xanaanada bisadaha, hayeeshe taasi kaliya waa inaadan ogeyn taariikhdiisa. Xagaagii 2006, laba bil kadib markii Chris uu lumiyay wiilkiisa Eric, oo 24-jir ahaa, kaas oo shil gaari ku dhintay, wuxuu ...
Zakariya February 12, 2018	Leave a comment 478 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Marka ay timaado in canug cuuryaan ah uu heli karo tacliinta uu u qalmo inuu ku naaloodo, xittaa ayeeyadiisa 76-jirta ah wax walba way u qaban kartaa. Haweeneydan da’da ah waxay maalin walba sideed goor gaarigiisa ku riixdaa Jiang Haowen – guriga iyo iskuulka – afartii sano ee lasoo dhaafay. Qorshaheeduna waa inay sii caawiso in allaale ...
Isma’il Raage – Tusaalaha nool ee Qarnigeenna!
Zakariya February 12, 2018	Leave a comment 266 Views
Muqisho (Himilonetwork) – Muqdisho waxay rafaadeysaa muddo ka badan 20-sano oo dagaallo ah, in badan oo dhalinyaradeeda kamid ahna waxay ku dhasheen qax iyo qalalaaso. Carruurta naafada ah, si kastaba, waa kuwa wajahaya daranyada ugu halista badan, dayacaad iyo heliwaaga fursad siman oo baahida aas’aasiga ah. Hayeeshe Ismaaciil Raage, oo 22 jir ah, naafanimadiisu kama horjoogsan yoolkiisa ah gaarista halka ...
Zakariya February 10, 2018	Leave a comment 304 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Haweeney ayaa lagu qasbay inay ilmaheeda kasoo bixiso god ay ku riday isaga oo nool, si ay u raali-geliso saaxiibkeeda cusub. Muuqaal la yaab leh oo laga duubay ayaa muujinayay hooyadan oo heysa cunug meyd ah oo saddex bilood jir ah – iyada oo aan muujineyn wax walwal ah. Haweeneyda ayaa markaas xabsiga la dhigay, cunugeeda waxaa ...
Faransiiska oo laga helay xabaalaha Muslimiiinta noolaa qarniyo hore
Tubaakada Taabuuga – Khatar heysata Jiilkeenna Dahabiga!